Muqdisho:Shirka Madaxda Dowlada Dhexe iyo maamul Goboleedyada oo furmay. - Ogaden24 | Ogaden24
Muqdisho:Shirka Madaxda Dowlada Dhexe iyo maamul Goboleedyada oo furmay.
Shirka wadatashiga dawlad goboleedyada iyo Dawladda federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furmay, kaas oo lagaga hadlayey arrimaha doorashooyinka iyo xidhiidhka dawlad goboleeedyada iyo dawladda federaalka soomaaliya.
Shirka waxaa ka qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo, taas oo muujinaysa isu soo dhawaanshaha dawladda dhexe iyo maamuladda hoos yimaadda oo beryahan qaar kamid khilaaf kala dhexeeyey dawladda federaalka soomaliya.
Madaxwaynaha Dowlada Federaalka Dalka Soomaaliya Maxamed cabdulaahi Farmaajo ayaa furay shirka ,waxaana lagu lafa guri doonaan Doorashooyinka iyo hanaanka siyaasadeed ee looga gudbi karo marxalada kala guurka ah ee uu dalku wajahayo.